आमा कहिले बन्ने? प्रश्नमा स्वस्तिमाले भनिन्: ‘हाम्रो डमरु ढिलो आउँछ, कडा आउँछ’
पोखरा २७ असोज- नेपाली चर्चित अभिनेता निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको जोडीलाई धेरैले चासोका रुपमा हेर्ने गर्छन् । यी दुई विवाह बन्धनमा बाँधिएको ३ वर्ष भयो । बिहेपछि स्वस्तिमा खड्काको झनै भाग्य चम्किएको छ ।
फ्यानले स्वस्तिमालाई राष्ट्रिय भाउजू पनि भन्ने गर्छन् । निश्चल र स्वस्तिमा दुवै आ–आफ्नो काममा व्यस्त छन् । यतिबेला भने दुवैले एकसाथ अभिनय गरेको फिल्म ‘घामड शेरे’ को चर्चा छ । दर्शकमा चासो के छ भने निश्चल र स्वस्तिमा आमाबाबु कहिले बन्दैछन्?
राजधानीमा चलचित्र ‘घामड शेरे’ को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रममा निर्देशक र फिल्मका अन्य कलाकारसँगै निश्चल र स्वस्तिमा पनि उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा पत्रकारले निश्चललाई सोधे – निश्चल र स्वस्तिमाको डमरु कहिले आउँछ?
फिल्ममा निश्चल ‘शेर’ को भूमिकामा देखिएकाले पत्रकारले ‘डमरू’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यो प्रश्नले एकछिन कार्यक्रम हलमा हाँसो फैलियो । निश्चल र स्वस्तिमा पनि दुवै हाँसे । निश्चलले प्रश्न सोध्ने पत्रकारकै पेट लागेको भन्दै टार्न खोजे । लगत्तै निश्चलको हातबाट स्वस्तिमाले माइक लिइन् र मुस्कुराउँदै भनिन् – हाम्रो चाहिँ डमरु ढिला आउँछ कडा आउँछ ।
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निश्चल र स्वस्तिमा सन्तानका लागि अझै तयार छैनन् । स्वस्तिमाले यसअघि आफू अहिले करिअरमै फोकस भएको बताएकी थिइन् । यता निश्चललले पनि एकपछि नयाँ फिल्म साइन गरेका छन् ।